🥇 ▷ TIM waxay fidisaa 4G waxayna ku bixisaa VoLTE in kabadan 3,200 oo magaalooyin ✅
TIM waxay fidisaa 4G waxayna ku bixisaa VoLTE in kabadan 3,200 oo magaalooyin
A TIM waxay sii deysay natiijooyinka maaliyadeed rubucii labaad ee sanadka 2019 waxayna ku dhawaaqday balaarin balaaran oo xagga daboolida ah VoLTE, kaas oo kuu oggolaanaya inaad adeegsato shabakadda 4G wicitaanada taleefanka caadiga ah. Isla muddadaas sannadkii hore, waxay lahayd VoLTE 1,559 magaalo, haddana hadda waxaa jira 3,325 magaalooyin leh teknolojiyad awood loo siiyey – in kabadan tirada labanlaab.
Tiknolojiyadda VoLTE waxay durba u adeegtaa 91% dadweynaha reer Brazil; Ku dhawaad ​​dhammaan 4G TEAM ayaa hoos yimaada, kaas oo shaqeynaya 3,321 magaalo. Adeeggan waxaa heli kara isticmaaleyaasha qorshe kasta, ha ahaato mid la sii diyaariyey, boostada ama kontaroolka.
Si aad u isticmaasho VoLTE, waa inaad haysataa taleefan casriga ah oo 4G-aad ku habboontahay oo aad joogtid goob ay adeegyadu ka heli karaan – ka eeg liiska buuxa ee magaalooyin iyo taleefannada ay bixiyeen adeeg-bixiyuhu. Haddii macmiilku ku sugan yahay magaalo aan lahayn caymiska VoLTE, wicitaanada waxaa lagu sameyn doonaa shabakadaha 3G ama 2G.
Wicitaanada 4G waxay leeyihiin tayo cod oo sareysa.
Faa’iidada ugu weyn ee wicitaanka 4G waa tayada codka, oo leh xallin ka sarreysa 2G iyo 3G. Sidoo kale wicitaanada ayaa si aad ah uga dhaqso badan shabakadaha kale waxayna keydisaa batterigaaga gacanta. Ma jiraan kharashyo dheeri ah oo la xiriira isticmaalka tikniyoolajiyada: wicitaanada ayaa la dallacsiinayaa sida ku xusan qorshaha qandaraasku.
Alone Vivo iyo TIM waxay adeegsadaan tikniyoolajiyaddan ganacsi ahaan dalka Brazil. Toddobaadkii hore Vivo wuxuu ku dhawaaqay in VoLTE laga heli doono in kabadan 380 magaalo. Claro wuxuu bilaabay tijaabinta iyo bilaabida adeegyada codka 4G ee adeegsadayaasha kala duwan.